ထိုအဆောက်အဦးသို့ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ စာရင်းသွင်းမည်
SafeAccess က ဧည့်သည်များနှင့် တည်နေရာများကို လက်ရှိ ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးအန္တရယ်ကင်းရှင်းရေး မူဝါဒများအတိုင်း လိုက်နာစေပြီး တည်နေရာများကို ကာကွယ်ထားလျက် ပြင်ပအန္တရာယ်များမှ လုံခြုံစေသည်။
သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကျန်းမာရေး အချက်အလက်များကို သိမ်းဆည်းထားခြင်းမပြုဘဲ ၎င်းသည် သင်၏ကိုယ်ပိုင်အရာဟု ယူဆထားပါသည်။
ပြင်ဆင်ချက် အသစ်များ မြန်မ
အကူအညီ အကြောင်း စည်းမျဉ်းများ ကိုယ်ရေးလျှို့ဝှက်မှု
WILLIAM BILL ROBERTS ECE-8 SCHOOL
မိဘများအတွက် အိမ်တွင်စစ်ဆေးခြင်း:English | Español | Việt | 简体中文 | Soomaali | العربية | नेपाली | Français | Русский | አማርኛ | မြန်မ
Safe Access နေ့စဉ်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု ကျောင်းသားများအတွက် ညွှန်ကြားချက်များ : English | Español | Việt | Soomaali | العربية | नेपाली | Français | Русский | አማርኛ | မြန်မ
DPS ကျောင်းသား စိစစ်ခြင်းစနစ်မှ ကြိုဆိုပါတယ်။ သင်သည် ဤစိစစ်ခြင်းကိုပြီးမြောက်လျှင် သင်၏ (သို့) သင့်ကျောင်းသား၏ ရောဂါလက္ခဏာများသည် "အသစ်" (သို့) "မမျှော်လင့်သောအရာများ" (သို့) ထိုလက္ခဏာများသည် သင်၏သာမန် ဓါတ်မတည့်ခြင်းကြောင့် (သို့) ရှိပြီးသားရောဂါအခံကြောင့် ဖြစ်နေကျ လက္ခဏာများဖြစ်သည်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။ Safe Access ကိုအသုံးပြုကာ ဝင်ရောက်သည့် သင်၏နေ့စဉ် ရွေးချယ်၍လုပ်နိုင်သော ကျန်းမာရေး စိစစ်မှုကို ပြီးမြောက်ရန် သင်သည် DPS ကျောင်းသားအိုင်ဒီ (သို့) ကျောင်းသား နေ့လည်စာနံပါတ်ကို အသုံးပြု၍ ဝင်ရောက်ရမည်။
နေ့စဉ် ကျောင်းသို့မလာမီ ကျောင်းသားတိုင်းသည် COVID နှင့်ဆက်နွယ်သော ရောဂါလက္ခဏာများကို စစ်ဆေးရမည်။ နေ့စဉ် ရောဂါလက္ခဏာ စိစစ်သည့်အရာကို ကျောင်းသို့ချိတ်ဆက်ထားမည် မဟုတ်ပါ။ ထိုဒေတာများကို ၂၄ နာရီကြာလျှင် ဖျက်ပစ်ပါမည်။ နာမကျန်းမှုကြောင့် ကျောင်းပျက်ကွက်မှုကို ကျောင်းသို့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်၍ သတင်းပို့ပါ။
ကျောင်းသား၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်ထံတွင် မေးခွန်းများရှိပါက သင့်ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ပေးကမ်းသူထံဆက်သွယ်ပါ (သို့) DPS ကျောင်းသားအားလုံး (ထောက်ပံ့ကျောင်းများအပါအဝင်) အတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပေးကမ်းသူတစ်ဦးထံမှ အခမဲ့ဖြစ်သော အကဲဖြတ်စစ်ဆေးမှုတစ်ခုကို ပေးကမ်းရန်အတွက် Denver Health ကျောင်းအခြေစိုက် ကျန်းမာရေးဆေးခန်းများ သို့ဆက်သွယ်ပါ။ သင်၏ အနီးဆုံး SBHC တည်နေရာကို မသိရှိပါက အောက်ပါတည်နေရာ အချက်အလက်များကို အသုံးပြု၍ စင်တာသို့ ခေါ်ဆိုပါ၊ (သို့) ကျောင်းအခြေစိုက် ကျန်းမာရေးဆေးခန်း အချက်အလက်လိုင်း ၃၀၃-၆၀၂-၈၉၅၈ သို့ခေါ်ဆိုပါ။
သင့်အိုင်ဒီ * သင်၏ ကျောင်းသို့မဟုတ်ဝန်ထမ်း အိုင်ဒီကို အသုံးပြုပါ။ သင်၏ အိုင်ဒီကို မသိပါက ကျေးဇူးပြု၍ သင့်တံဆိပ်ကိုကြည့်ပါ သို့မဟုတ် သင့်စီမံအုပ်ချုပ်မှု ဆောင်ရွက်ပေးသောသူထံ ဆက်သွယ်ပါ။
ထိုကျောင်းသားတွင် COVID-19 ရောဂါရှိသည်ဟု အတည်ပြုထားခဲ့ပါသလား (သို့) ထိုကျောင်းသားသည် လွန်ခဲ့သော ၁၄ ရက်အတွင်းက လက်ရှိ COVID-19 ရောဂါရှိသူ တစ်ဦးနှင့် (သို့) အရသာအသစ် (သို့) အနံ့သစ်မရသော သူတစ်ဦးနှင့် အနီးကပ်ထိတွေ့ခဲ့ပါသလား? *
ယနေ့ အောက်ပါတို့မှ တစ်စုံတစ်ခုဖြစ်နေပါသလား? *
● အဖျား (၁၀၀.၄) သို့မဟုတ် တုန်ချမ်းခြင်း
● သက်ရှူမဝခြင်း (သို့) အသက်ရှူရခက်ခဲခြင်း
● ကြွက်သား (သို့) ကိုယ်လက်ကိုက်ခဲခြင်း
● အရသာ (သို့) အနံ့မရခြင်း
● နှာပိတ်ခြင်း (သို့) နှာစေးခြင်း
*ဤစာရင်းသည် အပြည့်အစုံမဟုတ်သေးပါ။ အခြားပြင်းထန်သော (သို့) စိတ်ပူပန်စရာ ရောဂါလက္ခဏာများအတွက် ဆရာဝန်တစ်ဦးနှင့် ဆွေးနွေးပါ။